🥇 ▷ Apple wuxuu ka dhigaa macruufka 7 GM mid loo heli karo kuwa soo saara ✅
Apple wuxuu ka dhigaa macruufka 7 GM mid loo heli karo kuwa soo saara
Kadib dhacdada gaarka ah ee iPhone-ka ay maanta qabteen Apple, waxaan awoodnay inaan ku raaxeysano novelties-ka cusub ee cupertino ay noo keeneen. Dhammaantood si aad ah ayaa loo hadalhayay ugu dambeyntiina waxaan awoodnay inaan xaqiijinno maanta.
Apple Soo Bandhigo iPhonekaaga Cusub oo Soo Bilow Qaybta GM ee iOS 7
Waxyaabaha cusub ee aan soo aragnay waxaan ka arki karnaa midabka cusub ee midabada leh ee aaladaha mobilada, iPhone 5C, marka lagu daro soo cusbooneysiinta casriga casriga ah ee Apple, iPhone 5S, oo soo galay horyaal la rajaynayo, garaafyo iyo midabyo lacag ah.
Mid ka mid ah waxyaabaha si weyn loo sugayay ayaa sidoo kale ah nooca loo yaqaan ‘GM (Golden Master)’ ee nidaamka hawlgalka mobilada ee Apple, macruufka 7 oo dhawaan loo siidaayay soo-saareyaasha iyada oo loo marayo Xarunta Apple Dev Center.
Udejiso macruufka 7 GM ee iPhone, iPod taabashada, iPad iyo iPad mini
Markaa waxaan kuugu tageynaa xiriirada tooska ah ee aaladda ‘7 7 GM’ oo laga heli karo Apple Dev Center, sidaa darteed si aad u soo dejiso iyaga waxaad u baahan tahay inaad noqotaan hor-u-horumar.
Waxaa muhiim ah in la ogaado in, ugu yaraan ilaa hadda, aysan suurogal ahayn in lagu cusboonaysiiyo nooca GM ee iOS 7 iyada oo loo sii marayo isla aaladda, sida aan awoodnay inaan ku sameysanno noocyadii hore, sidaa darteed waxaan taxadiri doonaa inaan awoodno Daabac boggaga noocyada cusub ee nidaamka hawlgalka mobilada cusub ee Apple sida ugu dhaqsaha badan.